असल किताबलाई मर्न दिऊँ ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
एउटा छापिएको किताब बजार आउने प्रतीक्षामा रहेकी सुकन्याको धैर्यको बाँध किन टुटिरहेको छ ?
जेष्ठ ३२, २०७६ सुकन्या
अपराजिता, अति नै असमञ्जसमा परेकी छु । के गरूँ, कसो गरूँको स्थितिले दुब्लाइसकेकी छु । तिमीलाई जस्तो तर्क गर्न मलाई आउँदैन । झगडा गर्ने मेरो स्वभावै होइन । म त गोर्कीकी हजुरआमालाई आदर्श मान्ने व्यक्ति परेँ । तर हाम्रो बाबुले सिकाउनुभएको एउटा मन्त्रचाहिँ मलाई सम्झना छ, जुन म अति नै आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्ने गर्छु ।
त्यो तिमीलाई पनि थाहा छ तर तिमीलाई त त्यसको प्रयोग गर्नै परेन । तिमी सोझै हान्ने स्वभावको व्यक्ति पर्‍यौ । त्यस मन्त्रको नाम– बाबुले अंग्रेजीमा भन्ने गरेकाले अंग्रेजीमा नै भनौं– ‘इन्डाइरेक्ट हिट’ अथवा ‘प्यासिभ रेजिस्ट्यान्स’ । तर लेखेर विरोध गर्नु त डाइरेक्ट हिटजस्तै भयो होइन र ? के गर्ने खोइ ? होइन, लेखेरै विरोध गर्छु । कम्तीमा साक्षात्कार त गर्नुपरेन नि । यसैलाई ‘इन्डाइरेक्ट हिट’ अथवा ‘प्यासिभ रेजिस्ट्यान्स’ ठान्छु ।
आजभन्दा ६ वर्षअघिको कुरा हो । अति रुचाएर बाल–साहित्यका दुई अंग्रेजी पुस्तक पढेँ । आजका बालबालिकाको पिँढीमा यी पुस्तकमा अन्तरनिहित सन्देश पुर्‍याउनैपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि नेपाली भाषामा अनुवाद गरेँ । सुसंस्कारजस्ता मूल्यमान्यताले भरिपूर्ण ती पुस्तक मलाई ज्यादै उपयोगी लाग्यो । किताबमा परिवारमा सर्वोच्च स्थानको हकदार हाम्रा हजुरआमाहरूको पुस्तौंपुस्ता सर्दै आउने स्पर्शको महत्त्व देखाइएको छ । आफ्ना प्रियजनसँग कर्तव्यवश विछोड हुनुपर्दा अपनाउनुपर्ने संयमलाई उजागर गरिएको छ । यसरी अनासक्तिको पाठ बालापनदेखि नै अभ्यास गर्नुपर्ने सन्देश नेपाली बालबालिकामाझ पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व मैले पूरा गर्नैपर्छ भन्ने बोध भयो ।
कस्ता पुस्तक हुन् र पुस्तकका रचयिता को हुन् भन्ने जिज्ञासा भयो होला तिमीलाई । ल सुन, पुस्तकका नाम ‘तेन्जिङको मृग’ र ‘हजुरआमाको गीत’ हो । र, रचयिता हुन् बारबरा सोरोस ।
योगमायाबारे अध्ययन गर्ने बारबरा निम्री अजिजमार्फत परिचित भएकी हुन् बारबरा सोरोस । उनी तिम्रै मित्र बारबरा निम्री जत्तिकै घनिष्ठ थिइन् तिमीसँग । तिमीहरूबीच भएको पत्राचार अझ सुरक्षित छन् मसँग । तथापि म यहाँ उनको विस्तृत परिचय दिन आवश्यक ठान्छु ।मन र शरीरका विज्ञ (प्राक्टिसनर) हुन् बारबरा सोरोस । उनले कथावाचनलाई बीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो थेरापी (उपचार विधि) को एक अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रयोग गरेकी छन् ।
तिब्बती औषधि विधिकी छात्रा सोरोसले बालनाटक पनि लेखेकी तथा निर्देशन गरेकी छन् । साथै, सिर्जनात्मकता तथा आरोग्यता (हिलिङ) विषयलाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा कार्यशाला सञ्चालन गर्न पनि उत्प्रेरित गरेकी छन् । तिमीसँगको उनको गहिरो सम्बन्ध हुँदा साहित्य, महिला मुक्ति तथा संघर्षसँगै अरू धेरै विषयमा पत्राचारद्वारा छलफल हुन्थ्यो । उनले तिमीलाई पठाएका पुस्तकमा एउटाको नामचाहिँ म सम्झिरहन्छु, ‘द कलर पर्पल ।’ विदेशका महिला समूहका पत्रपत्रिका पनि तिमीकहाँ निकै आउँथे, यसमा उनको पनि योगदान छ । तीमध्ये एउटाको नाम सम्झन्छु, ‘द आउट राइट ।’
उनीसित महिलासम्बन्धी धेरै छलफल भइरहन्थ्यो तिम्रो । तिमीले छाडेर गएपछि मसँग उनको घनिष्ठता बढेर गयो । महिला तथा बालबालिकाप्रति अति संवेदनशील उनले धेरै विपन्न मातापिताका बालबच्चालाई प्रायोजन गरेर विद्यालय शुल्कसमेत भरिदिएकी छन् ।
यति मात्र कहाँ हो र, लेखिकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न वर्षभरि उत्कृष्ट ठहरिएका पुस्तकका निम्ति दुई लेखिकालाई १०/१० हजारको पुरस्कारसमेत प्रायोजन गरेकी थिइन् । साहित्यकार सुधा त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको अभ्युथान महिला साहित्य प्रतिष्ठानले यस कार्यको अभिभारा लिएको थियो । केही वर्षको सञ्चालन सफल र उत्साहवर्द्धक रह्यो, तर अफसोस यसले निरन्तरता पाउन भने सकेन ।
कारण प्रायोजकको थिएन, प्रतिष्ठानकै सदस्यहरूको अति व्यस्तता हुन सक्छ । लागिपरेर समय जुटाउन नसक्दा समस्या आयो । प्रतिष्ठान बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो । यो बिलाइसक्यो अथवा कार्यरत छ, थाहा छैन । जे होस् कार्यक्रमको योगदानको हामीले कदर गर्नैपर्छ । कतिपय महिला साहित्यकार पुरस्कृत मात्र भएनन्, नेपाली साहित्य जगत्ले पनि नूतन कृतिहरूको जगेर्ना गर्न पाए । यी उपलब्धि पनि हाम्रै सम्पत्ति हुन्, सन्तोष गरौं ।
केही थपौं— वास्तवमा तिमी मेरा सल्लाहकार, अझ भनौ गुरु नै थियौ । तिमी नहुँदा, मेरो मुड र हाउभाउबाट मलाई समस्या परेको थाहा पाउने बारबरा निम्री अजिज भन्ने गर्थिन्, ‘बारबरा सोरोसलाई लेख ।’
यस्तै एक पटक सोरोसलाई मदिरा सेवन गरेर स्वास्नी र बालबच्चालाई सताउने र हाँकधाँक गर्ने पुरुषहरू कस्ता मनस्थितिका हुन् भनेर मैले प्रश्न राखेकी थिएँ । उनले त एउटा सुन्दर लेख नै लेखेर पठाइन् । त्यो लेख ‘कायर पुरुष नै आक्रामक हुन्छन्’ भन्ने शीर्षकमा २०६७ सालमा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो ।
अब बारबरा सोरोससँग जोडिएको मूल तथ्यतिर फिरौं । उनका किताबको अनुवादपश्चात् उत्साहित भएर छिमेकी युवा सुमेश न्यौपानेको सहयोगमा प्रकाशनको निम्ति एक निवेदन पठाएँ । मेरो एक पत्रको आधारमा डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले उक्त अनुवाद आफ्नै अक्सफोर्ड पब्लिकेसनबाट प्रकाशित गरिदिने वचन दिए । खुसीको पारावार रहेन ।
डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको सहृदयता र सौजन्यताको प्रशंसा जति गरे पनि नपुग्नेजस्तो लाग्यो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरियो । कपिराइट अधिकार अमृत आवासीय विद्यालयको नाममा रहने भयो । लेखक र अनुवादकले समेत प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक अमृत विद्यालयकै विपन्न विद्यार्थीको निमित्त समर्पण गर्ने निश्चय भयो ।
बारबरा सोरोसको अनुरोधमा पुस्तकका भाव चित्रकार ड्नुटा मेयर र जेकी मोरिसले सहृदयतापूर्वक आफ्ना भावचित्रहरू नेपाली अनुवादमा पनि प्रयोग गर्ने अनुमति प्रदान गरे । अति उत्साहित प्रकाशक शर्माले लोकार्पण समारोहमा उपस्थित हुन हवाई टिकट शुद्घ पठाउने आश्वासन दिए । बाल साहित्यकारको रूपमा नेपाली बाल साहित्य जगत्मा परिचय बनाउन पाउनु बारबराको निम्ति सीमातीत खुसीको विषय थियो । तदारुकताका साथ काम अघि बढ्यो ।
त्यसपश्चात् उनी मृतप्रायः साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा चयन भए । उनको दाबी छ, मैले साझालाई पुनर्जीवन दिएँ । साझालाई बौराएँ । धडाधड नयाँ कृतिको प्रकाशन गरेँ । उनको कार्यव्यस्तता बढ्नु नितान्त स्वाभाविक थियो । उनको जिकिर छ, धेरै बाधा तेर्सिए । उनी अध्यक्ष भएपछि साझामा भएका संघर्षसँग अवगत थिएँ । उनको दाबा सही भए दाद त दिनैपर्छ, अपराजिता ।
अरू भए के हुन्थे कुन्नि, तर उनले त छाती तानेर संघर्ष गरे र उनी ‘बादलभित्रको घाम’ रचेर आफ्नो अडान कायम राख्न समर्थ भए ।
उनी साझामा व्यस्त हुँदा केही समय धैर्य राखेँ । पटक–पटक भेटसमेत गरेँ, उनको उत्साह र आश्वासनमा कत्ति पनि कमी आएको अनुभव मलाई भएन । असीम विश्वासले गहिरोसँग जरा गाडिसकेको थियो । तथापि सम्भव होला नहोला भन्ने आशंकाले मनमा घर गरिरह्यो । किनभने समयावधि ४ वर्ष नाघिसकेको थियो ।
हैरान भएर साहित्यकार प्रदीप नेपाललाई पुकारेँ, जसलाई सानो छँदा तिमीले माया गरेर बुच्चे भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थ्यौ । घनिष्ठताले प्रदान गरेको विश्वासको आधारमा नै त पुकारेकी हुँ नि । प्रदीपसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो । नभन्दै काम तदारुकताका साथ अघि बढ्यो । सम्पादकहरू घरमै आए । अति सुन्दर आकृतिका दुई पुस्तक ‘तेन्जिङको मृग’ र ‘हजुरआमाको गीत’ तयार भयो । सुन्छु, प्रकाशनगृहको भण्डारकोठा यिनै तयारी पुस्तकले भरिएका छन् । केही नमुना कपी मकहाँ पनि आइपुगे, बारबराकहाँ पनि दुई चार प्रति पुगे ।
अरू २ वर्ष बिते, तर हरे, ती भण्डारका पुस्तक बाहिर आउन सकेनन् । व्यवधान के हो ? थाहा भएन । कैयौं पटक सम्पर्क गरेँ, जोसिलो आवाजमा आश्वासन प्राप्त हुन्छ, फेरि शून्य काम । अमेरिकावासी बारबरा हतास भइन् । व्यक्तिगत तौरले उनले प्रकाशक शर्मासँग सम्पर्क गरिन् तर … ।
अब त अति नै थाकिसकेँ, अपराजिता, धैर्यको बाँध टुटिसक्यो । डर लाग्छ, उनको उठबस ठूलाबडाको साथमा छ, म बबुरोको आवाज कसले सुनिदेला ? म कहिल्यै आक्रामक हुन सकिनँ, सक्दिनँ पनि । आक्रामक हुनु मेरो स्वभावको विपरीत कुरो । सहृदय हाम्री विदेशी साथीलाई के जवाफ दिने ? कि यसरी नै एक उपयोगी बालकथाको असामयिक अवसान पो हुने हो कि भनेर पिरोलिरहूँ ? के गरूँ ? जवाफ देऊ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ १२:१०
जेष्ठ ३२, २०७६ स्वीकृति बराल
एक दिन उसँग कुरा गर्दै थिएँ । कुरैकुरामा मैले उसलाई सोधेँ, ‘तिमी ठूलो भएपछि के गर्छौ ?’ उसले पनि मीठो तोतेबोलीमा जवाफ दियो, ‘मामू म ठूलो भएपछि अफिस जान्छु अनि हजुरलाई धेरै चकलेट ल्याइदिन्छु ।’ सानो बच्चाले माया गर्दै त्यसो भनेको सुन्दा सारै मजा लाग्दो रहेछ ।
त्यसैले फेरि सोधेँ, ‘अनि के गर्छौ ?’ उसले फेरि पनि उसैगरी माया लाग्दो बोलीमा जवाफ दियो, ‘अनि हजुरले गल्ती गर्नुभयो भने हजुरको गालामा ठ्याम्म हान्छु ।’ म झसंग भएँ । नमज्जा लाग्यो, कताकता लाज पनि । वरिपरि आफ्नो आँखा डुलाएँ, कसैले सुनेकी भन्ने पिरले ।
मीठो बोल्दा मख्ख पर्ने मेरा अनुहार उसले नमीठो कुरा गर्दा बिग्रिसकेको थियो । मैले हतारहतार उसलाई भनेँ, ‘बाबु त्यसो भन्नु हुँदैन नि, पिट्नु नराम्रो कुरा हो ।’ उसले फेरि पनि मायालाग्दो तरिकाले भन्यो, ‘हजुरले मलाई त्यही भन्नुभएको होइन त ? गल्ती गरे ठ्याम्म पिट्छु भनेर ।’ बिचरा मैले जे बोल्यो त्यही सिक्छ । मैले जे गर्‍यो त्यही गर्छ । उसले राम्रो बोल्दा मैले सिकाएको भन्दै गमक्क पर्ने म उसले नराम्रो बोल्दा उसलाई गाली गर्न पछि पर्दिनँ । मैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो उसले राम्रा नराम्रा दुवै मबाट नै सिकेको हुन्छ । सानो छ तर धेरै कुरा सिकाउँछ मलाई । गलत कुरा सानाले गरे पनि गलत हुन्छ र ठूलाले गरे पनि गलत हुन्छ । मबाट गल्ती भएको थियो । उसले त्यसो भन्दा मलाई नमज्जा लागेजस्तै मैले पिटुछु भन्दा उसलाई पनि नमज्जा लागेको हुनुपर्छ । आफूलाई सच्याउँदै भनेँ, ‘छोरा अबदेखि म पनि पिट्ने कुरा गर्दिनँ र तिमी पनि नगर्नू है ।’ उसले पनि बुझेझैँ गरेर टाउको हल्लायो ।
उसका हरेक क्रियाकलाप मसँग जोडिएका हुन्छन् । मेरै वरिपरि घुमिरहन्छ र मबाट केही न केही सिकिरहन्छ । मैले धेरै नजिकबाट उसका क्रियाकलापहरू नियालेकी छु । उसलाई नजिकबाट नियाल्दा मलाई उसलाई खासै रमाइलो भएजस्तो लाग्दैन । हुन त बाल्यकाल सबैले लोभ गर्ने उमेर हो । कति आनन्द सुत्यो, खायो, खेल्यो अनि केही कुरा चित्त नबुझे रोइदियो । रमाइलो त बच्चै हुँदा हो । धेरैले यस्तै भनेकी सुनेकी छु । हुन पनि हो बालहठको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । जन्मनेबित्तिकै कसैले नसिकाई रुन जानेका बच्चाहरू जे कुरामा पनि रोएरै जित्न खोज्छन् । रुवाइ उनीहरूको हतियार हो । भविष्यको चिन्ता नभएका उनीहरूको जीवन हेर्दा जति लोभलाग्दो र रमाइलो देखिन्छ त्यति नै उनीहरूलाई रमाइलो होला कि नहोला भन्न सकिँदैन । बच्चाले यो कुरा बताउन सक्दैनन् ठूलो भएपछि ती कुराहरू यादै हुँदैनन् ।
सानो बच्चा जो आफ्नो रहर व्यक्त गर्नै सक्दैन, जो आफ्नो रहर बताउनै सक्दैन, जो आफू मनलागी हिँड्न पाउँदैन, चकचक गर्न पाउँदैन, मन लागेका सारा कुरा खान पाउँदैन, के रमाइलो होला र त्यो उमेरमा ? के लोभ गर्नु र त्यो उमेरको । मेरो विचारमा बाल्यकालका आफ्नै दुःखद पक्ष छन्, आफ्नै अप्ठ्याराहरू छन्, गुनासाहरू छन् जो सधैँ अव्यक्त रहन्छन् ।
ऊ टीभी हेर्न खोज्छ, म आँखा बिग्रन्छ भनेर दिन्न । ऊ सामान चलाउन खोज्छ, म सामान बिग्रन्छ भनेर दिन्नँ । ऊ बाहिर डुल्न जान खोज्छ, म बानी बिग्रन्छ भनेर दिन्नँ । ऊ पानीमा खेल्न खोज्छ, म चिसो लाग्छ भनेर दिन्न । ऊ कोठामा उफ्रन खोज्छ, म हल्ला भयो भनेर दिन्नँ । म उसका साना साना रहर मारिरहन्छु र भन्छु म उसलाई असाध्यै धेरै माया गर्छु र ऊ पनि ढुक्क भएर भन्छ, ‘मामू मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ ।’ ऊ ढुक्क छ म उसका हरेक कुरा बुझ्छु भनेर किनभने ऊ मेरा हरेक कुरामा विश्वास गर्छ तर म आफूलाई थाहा छैन म उसका सारा कुराहरू बुझ्छु कि बुझ्दिनँ । म आफूलाई जाडो भए उसलाई लुगा थपिदिन्छु र आफूलाई गर्मी भए उसको लुगा फुकालिदिन्छु । मैले आफूलाई बुझेँ कि उसलाई ?
अझै बोली नै नफुटेको बेलामा त झनै बिजोग हुन्थ्यो । ऊ रुन्थ्यो, म उसलाई भोक लाग्यो कि भनेर हत्तपत्त दूध खुवाउथेँ । अझै चुप नलागे कीराले टोक्यो कि भनेर लुगा खोलेर हेर्थेँ र अझै पनि रुन नछोडे पेट दुख्यो कि भन्ने अनुमान गर्थें । कहाँ सक्थेँ र म उसको रुवाइको अर्थ बुझ्न । अनुमान मिले ऊ चुप लाग्थ्यो नमिले रोइरहन्थ्यो । तर म लाजै पचाएर उसलाई भन्छु, ‘बाबु म तिमीले नभने नि तिम्रा सारा कुरा बुझ्छु ।’ बिचरा सानै छ पत्याउँछ मेरा सारा कुरा र मुसुक्क हाँस्छ । उसलाई ढुक्क लाग्दो हो मेरा कुराले ।
हुन त बुबाआमाको मायामा स्वार्थ हुँदैन भन्छन् तर मलाई अलिअलि स्वार्थ भएझैँ लाग्छ । माटोमा खेल्न नदिनुमा मेरो स्वार्थ छ । लुगा फोहोर भए धुन गाह्रो हुन्छ । हेर्दै जाने हो भने अलिअलि स्वार्थ हरेक कुरामा देखिन्छ । उसलाई जन्माउनु मेरो रहर थियो र उसको हुर्काइ बढाइ पनि मेरै रहरअनुसार भइरहेको छ । म उसको रहरअनुसार चलेको छैन । सानै भए पनि उसका आफ्नै किसिमका रहर छन् । यो खान्छु त्यो खान्न, यो लगाउँछु त्यो लगाउँदिन, त्यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्न । मलाई आफू खुसी भएको बेला उसका यस्ता कुराहरू मीठा लाग्छन् र हाँसिदिन्छु उसका कुरामा तर मुड ठीक नहुँदा रिस उठ्छ, त्यसैले रिसाउँछु त्यही कुरामा । म उसको एउटै कुरामा कहिले हाँस्छु र कहिले उसलाई गाली गर्छु । कठै ! के बुझ्दो हो उसले पनि, के ठीक के बेठीक ?
म घडी हेर्छु र उसलाई सुताउँछु, घडी हेर्छु र उसलाई उठाउँछु । म घडी हेरेर उसलाई खुवाउँछु, घडी हेरेर उसलाई पढाउँछु । दिउसो धेरै सुते राति नुसुत्ला र आफ्नो निद्रा बिग्रिएला भन्ने पीर हुन्छ मलाई, त्यसैले उसलाई हतारहतार उठाउँछु उसको निद्रा भंग गरेर । ऊ मन नलागी नलागी उठ्छ, एक छिन रुन्छ र खेल्न थाल्छ । अब मेरो सुत्ने बेला हुन्छ, उसलाई सुताउन खोन्छु । बिचरा निद्रा नलागे पनि मेरो वरिपरि घुमिरहन्छ र निदाउने प्रयास गर्छ । अरू गरोस् पनि के ? म बत्ती निभाइदिन्छु उसलाई सुताउने र आफू सुत्ने बहानामा ।
न उसलाई सुताएको बेलामा सुत्न मन हुन्छ न उसलाई उठाएको बेलामा उठ्न मन हुन्छ । न त उसलाई पढ्ने नै इच्छा छ । उसलाई थाहा छैन पढेर के हुन्छ ? म स्कुल पठाउँछु ऊ खुरुखुरु जान्छ । म ख्वाउँछु ऊ खुरुखुरु खान्छ । उसलाई थाहा छ म जिद्दी छु भनेर । मलाई जसरी नि ख्वाउनु छ उसलाई जसरी नि खाएर सक्नु छ । उसलाई त खालि खेल्न मन लाग्छ तर कहाँ पाउँछ र मन लागेजस्तो गर्न । मैले मेरो सानो छोरालाई नियम कानुनमा बाँधेकी छु । मेरो विचारमा जति बेला जे गर्नुपर्नेजस्तो लाग्छ त्यहीत्यही गराउन खोज्छु । मेरो कुरा उसको सानो दिमागले बुझ्दैन । ऊ आफ्नै सुरमा रमाउन खोज्छ जसले गर्दा मेरो सुर बिग्रन्छ र फेरि रिसाउँछु ऊसँग जसले केही बुझेकै छैन ।
ऊ बिनारहर धेरै काम गरिरहन्छ र पनि हाँसिरहन्छ । म मेरो रहरमा उसलाई चलाउँछु तैपनि हाँसिरहन सक्दिनँ । कति फरक छ उसमा र ममा । अहिले त कुरा बुझ्दैन र छिनमै सारा कुरा भुल्छ तर ठूलो भएको भए मेरो यो व्यवहारमा पक्कै पनि धेरै रिसाउने थियो होला मसँग । तर, नरिसाउनु छोरा म धेरै बुझ्छु, त्यसैले तिमीलाई धेरै कुरा सिकाउन बाध्य छु र तिमी केही पनि बुझ्दैनौ, त्यसैले मैले सिकाएको गर्न बाध्य छौ । मलाई तिमीलाई ठूलो मान्छे बनाउनु छ, त्यसैले तिमी स्कुल जानैपर्छ । मलाई तिमीलाई बलियो बनाउनु छ, त्यसैले तिमीले खानैपर्छ ।
मबाट उसले कति सिकेको छ, मलाई थाहा छैन तर मैले भने उबाट मैले धेरै कुरा सिकेकी छु । सानो छ तर दिमाग भने जिज्ञासा नै जिज्ञासाले भरिएका छन् उसका । आफ्ना वरिपरि भएका सारा घटनाहरू नियालिरहन्छ र मनमा जे प्रश्न आउँछ सोधिहाल्छ । उसलाई हेर्दा लाग्छ उसको दिमाग प्रश्नैप्रश्नले भरिएको छ । हरेक कुरामा किन र कसरी भनेर प्रश्न सोध्नु उसका लागि सामान्य कुरा हो । उसलाई धेरै कुरा सिक्नु छ, धेरै कुरा जान्नु छ । ऊ कुनै पनि कुरा बोल्न नपाउँदै टपक्क टिप्छ । त्यसैले मैले केही गर्दा, केही बोल्दा निकै सोच्नुपर्ने हुन्छ । मैले एकचोटी भनेको कुरा उसको दिमागमा बसिहाल्छ । ऊ सितिमिति बिर्संदैन । पछि त्यही प्रश्नमा अर्को जवाफ दिएँ भने अस्ति अर्कै भनेको हैन भन्छ ।
उसका कति प्रश्नको त म जवाफ दिन सक्दिनँ । एक दिन सोध्यो छोराले, ‘मामू सुन्तला किन सुन्तला रङको भएको ?’ खै किन भएको हो, के जवाफ दिनु ? उसको अर्को प्रश्नले त मलाई स्तब्ध नै बनायो । सोध्यो, ‘मामू गाई भगवान् हो ?’ एक छिन सोचेर भनेँ, ‘हो बाबु ।’ मैले उसलाई त्यही जवाफ दिएँ जुन मैले आफू सानो हुँदादेखि सुन्दै आएकी थिएँ । जे सुन्यो जे सिक्यो त्यही जान्ने त हो मैले पनि । सायद मेरो जवाफले उसको कौतूहल मेटिएन । फेरि सोध्यो, ‘अनि मामू त्यो भगवान्लाई पिट्दै पछिपछि हिँड्ने को हो नि ? भगवान्लाई पिट्न सकिन्छ त ?’ म जवाफविहीन भएँ । सायद मैले गलत जवाफ दिएँ ।
उसले पहिले पनि एक दिन त्यसैगरी मैले भगवान्लाई प्रसाद चढाउँदा सोधेको थियो, ‘त्यो कसले खान्छ मामू ?’ मैले भनेँ– भगवान्ले । ऊ मजाले हाँस्यो र भन्यो— ढुंगाले केही खाँदैन मामू । ऊ सानै भए पनि आफूले जानेको कुरामा शतप्रतिशत विश्वस्त हुन्छ तर म ठूलो भएर पनि अलमल हुन्छु । जति ठूलो भयो उति नजान्ने भइँदो रहेछ कि क्या हो ! नत्र किन म जवाफ दिन सक्दिनँ उसका स–साना प्रश्नहरूको । म आज पनि उसका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दै छु । उत्तर पत्ता लगाएर उसका जिज्ञासा मेटिने गरी उसका अबोध प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकेँ भने मात्र पनि आफूलाई त्यो सानो बच्चाभन्दा जान्नेसुन्ने ठान्ने थिएँ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ १२:०८